अनुसन्धान भन्छ : सम्भोगबाट फैलिने जीव मस्तिष्कका लागि खतरनाक
यौन सम्बन्धबाट फैलिएको टोक्सोप्लाज्मा गोन्डी परजीवी लगभग ५० प्रतिशत मानिसमा पाइन्छ। मानिसमा हुने सिजोफ्रेनिया र अन्य गम्भीर मानसिक रोगका लागि यो जिम्मेवार मानिएको छ। तर अब फिनल्याण्डका अनुसन्धानकर्ताहरूले यसबारेमा अनौठो दाबी गरेका छन्। वैज्ञानिकहरू भन्छन्- ‘यो परजीवीबाट संक्रमित व्यक्तिहरू अरूभन्दा धेरै सुन्दर देखिन्छन्।’
टोक्सोप्लाज्मा गोन्डी परजीवी के हो?
यो जीव संसारभर पाइन्छ। टोक्सोप्लाज्मा परजीवी प्रायः पाल्तु बिरालोहरूको दिसामा पाइन्छ। यस संक्रमण भएपछि मानिसहरूमा हल्का फ्लू जस्तो लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ। अघिल्लो अनुसन्धानले यस परजीवीलाई कार दुर्घटना र आत्महत्या, साथै साहस र सफलताको रहस्यसँग जोडेको थियो।
संक्रमित व्यक्ति बढी आकर्षक र स्वस्थ देखिन्छन्
यो अनुसन्धान फिनल्याण्डको टुर्कु विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूले गरेका हुन्। उनीहरू भन्छन्- टोक्सोप्लाज्मा परजीवीबाट संक्रमित व्यक्तिहरू अरूको तुलनामा बढी आकर्षक र स्वस्थ देखिन्छन्। विशेषगरी विपरित लिंगका मानिस बढी सुन्दर लाग्छन्। परजीवीको प्रभाव महिला र पुरुष दुवैमा समान रहेको पाइयो।
परजीवीलाई नै फाइदा
वैज्ञानिकहरूका अनुसार आफ्नो शिकारलाई आकर्षक बनाउनबाट टोक्सोप्लाज्मालाई नै फाइदा हुन्छ। परजीवीबाट संक्रमित बिरामी अरूलाई सुन्दर देखिन थाल्छ, जसका कारण बढी यौन साथी बन्ने सम्भावना रहन्छ। यसरी परजीवीले धेरै मानिसहरूलाई संक्रमित गर्न सक्षम हुन्छ। शोधकर्ताहरू भन्छन्- ‘रणनीति शताब्दीको विकासबाट विकसित भएको पाइन्छ।
अनुसन्धानमा संलग्न जीवविज्ञानी जेभियर बोराज-लियोनले भनेका छन्- एक अध्ययनमा मुसामा गरिएको प्रयोगले टोक्सोप्लाज्माबाट संक्रमित हुँदा भाले मुसाहरू पोथी मुसाहरूप्रति बढी यौन आकर्षण हुने गरेको देखाएको छ। जसले यौन सम्पर्कका लागि उनीहरूलाई तयार गर्छ।’
अनुहारमा कसरी परिवर्तन गर्छ?
यसको कुनै बलियो प्रमाण छैन, तर वैज्ञानिकहरू भन्छन्- सायद परजीवीले मानिसको हर्मोनमा परिवर्तन गर्छ। यसले उनको अनुहारको सौन्दर्यमा असर गर्छ। उदाहरणका लागि, केही अवस्थामा यस्तो पत्ता लागेको छ कि संक्रमित पुरुषहरूमा टेस्टोस्टेरोनको स्तर अरूको तुलनामा उच्च हुन्छ।
वैज्ञानिकहरूको अर्को सिद्धान्तअनुसार परजीवीले मानव शरीरमा रहेका रसायन र न्यूरोट्रान्समिटरहरूलाई हेरफेर गर्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्छ। यस हेरफेरको साइड इफेक्ट अनुहारको सौन्दर्य हुन सक्छ।
२१३ जनामा ​​अनुसन्धान
तिनीहरूको सिद्धान्त परीक्षण गर्न, वैज्ञानिकहरूले परजीवीबाट संक्रमित ३५ मानिसहरू (२२ पुरुष, १३ महिला) १७८ सामान्य मानिसहरू (८६ पुरुष, ९२महिला) सँग तुलना गरिएको थियो। कयौं परीक्षणपछि संक्रमितको अनुहारमा परिवर्तन देखिएको थियो। उनको अनुहार अरूको भन्दा धेरै सममित देखिन्थ्यो। साथै संक्रमित महिलाको तौल सामान्य महिलाको भन्दा कम रहेको पाइएको छ। यी सबै कुराले मानिसलाई आकर्षक बनाउँछ। -एजेन्सी
टाउको सन्तुलनको राजा श्री इभान्स
विवाहको निर्णय लिनुअघि के-के कुरामा ध्यान दिने ?
मानिसले लुकाउन खोज्ने ५ सत्य